Ifulethi lesimanje e-Old Quarter - I-Airbnb
Ifulethi lesimanje e-Old Quarter
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Alicia
I-loft ehlukile nengcolile etholakala enkabeni ye-Old Town, ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kuzo zonke izindawo futhi izinyathelo ezimbili nje kuphela ukusuka esiteshini sesikebhe sase-Vigo lapho isikebhe sihamba khona ngamahora e-Cies Islands.
I-90 m2 Loft enombhede omkhulu, i-closet enkulu, igumbi lokugezela elihle, ikhishi le-Bulthaup negumbi lokuphumula elithokomele elinombhede omusha sha wesofa kanye netafula lokudlela eliyindilinga. Ilungele abantu abashadile, ilala abantu abangu-4.
4.67 · 92 okushiwo abanye
I-Vigo ipholile isuka e-Old Town. Le ndawo engumakhelwane iyidolobhana elincane elisenkabeni yedolobha eliphithizelayo, lezimboni. Inqubo yokuvuselela, isaqhubeka, ivumele ukuphila komakhelwane ukuthi kugcwale kancane kule ndawo enhle yemigwaqo nezindlela eziya olwandle. Ngaphezu kwalokho, ukwenye yezindawo ezinhle kakhulu zokudlela zedolobha; i-Vigo 's Old Town iyindawo ekahle kakhulu yewayini nama-tapas. Ungahlala futhi udle kwezinye zezindawo zokudlela zomlando zedolobha, unambithe inhlanzi nokudla kwasolwandle okuhamba phambili e-Spain.